Jaamacadda Benaadir oo abaal-marino qaali ah guddoonsiisay arday ku guuleysatay tartan Aqooneed – Balcad.com Teyteyleey
Jaamacadda Benaadir oo abaal-marino qaali ah guddoonsiisay arday ku guuleysatay tartan Aqooneed
Maamulka Jaamacada Banaadir ayaa abaal marino lacageed guddoonsiiyey arday kaalimaha hore ka gashay Tartan aqooneed bisha Ramadaan loo qabtay qaar ka mid Dugsiyada sare ee gobolka Banaadir kaasoo ka socday Idaacada Risaala ee magaalada Muqdisho.
Tartankan oo socday muddo ku siman 16 maalmood ayaa waxaa ka qeyb qaatay arday sanadkan dhameysatay waxbarashada dugsiga sare oo ka qelin jebiyey illaa 16 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir.
Tartankii ugu dambeeyay ayaa waxaa isku arkay iskuulada Abuu-Xaniifa iyo Daaru-taqwa, waxaana kaalinta koowaad ku guuleystay iskuulka Xaniifa halka iskuulka Daaru-taqwa uu kaalinta labaad buuxiyey.
Jaamacadda Banaadir oo tartankan taaba gelineysay ayaa iskuulka Abii-Xaniifa oo kaalinta koowaad galay ku abaalmarisay lacag dhan $800 oo Dollar, iyadoo iskuulka Daaru-taqwa ee kaalinta labaad galay isna lagu abaalmariyay lacag dhan $500 oo Dollar.
Munaasabada xiritaanka tartankan ayaa ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka Idaacadda Risaala, masuuliyiin ka tirsan Jaamacadda Banaadir, Arday, macalimiin iyo xubno kale.
Madaxa Xiriirka bulshada iyo Suuq-geynta ee Jaamacadda Banaadir Khadar Maxamed Cali oo munaasabadaas ka hadlay ayaa sheegay Jaamacadda Banaadir ay mar walba u taagan tahay dhiiragelinta iyo horumarinta Waxbarsahada, wuxuuna xusay iney xaflad ballaaran u qaban doonaan dhowaan Ardaydii ka qeyb gashay Tartankan, isagoo ardayda iskuulka Xaniifa ugu hambalyeeyey guusha ay gaareen iyo dedaalka ay muujiyeen.
“Waxaan salaan iyo hambalyo idinkaga wadaa maamulka sare ee Jaamacada Banaadir oo howlo shaqo awgood uga soo qeyb geli waayey xiritaanka Tartankan, waxayna ardayda guuleysatay iyo kuwa kaleba u rajeeyeen nasiib wanaagsan” ayuu yiri Khadar Maxamed Cali.
Agaasimaha Idaacadda Risaala Maxamed C/wahaab C/llaahi ayaa isna ugu mahadceliyay Jaamacadda Banaadir kaalinta ay kaga jirto horumarinta iyo dhiirigelinta waxbarasgada ubadka Soomaaliyeed, isagoo xusay in abaalmarinta la bixiyay ujeedadeedu tahay sidii ay ugu ciideysan lahaayeen Ardaydii ku guuleysatay tartankan.
Maamulayaasha iskuulada kaalimaha hore ka galay tartankan ayaa iyana munaasabadaas ka sheegay iney ku faraxsan yihiin abaalmarinada qaaliga ah ee la siiyay, waxayna Jaamacada Banaadir iyo Idaacada risaala oo iska kaashaday tartankan uga mahad celiyeen kaalinta ay ka qaadanayaan dhiirigelinta ardayda u heelan waxbarashada, waxaana munaasabadaas ay ku dhamaatay jawi farxadeed.
The post Jaamacadda Benaadir oo abaal-marino qaali ah guddoonsiisay arday ku guuleysatay tartan Aqooneed appeared first on Ilwareed Online.
Qarax qasaare geystay oo goor dhow ka dhacay Muqdisho